Imfazwe yaseChattanooga kwimfazwe yaseMelika
I-Battle of Chattanooga yalwa noNovemba 23-25, ngo-1864, ngexesha leMfazwe yaseMelika (1861-1865) kwaye yabona imikhosi yaseManyano ikhulula isixeko ize iqhube i-Confederate Army yaseTennessee. Ukulandela ukunqotshwa kwalo kwiMfazwe yaseChickamauga (Septemba 18-20, 1863), i-Union Army yaseCumberland, ekhokelwa nguMphathi Jikelele uWilliam S. Rosecrans , ibuyele kwisiseko sayo eChattanooga. Ukufikela ukhuseleko kwidolophana, bakhawuleza bamisa ukukhusela phambi kokuba uGeneral Braxton Bragg afune ukuqhuma i-Army yaseTennessee.
Ukuya kwiChattanooga, uBragg wavavanya iindlela zakhe zokujongana notshaba olubethiwe. Engathandi ukwenza ukuba ilahleko ezinzima zidibene nokuhlaselwa isitha esomeleleyo, wacinga ukuhamba ngaphesheya koMlambo waseTennessee. Le ntshukumo yayiza kubangela amaRosecrans ukuba ayeke umzi okanye umngcipheko wokunqunyulwa emigqeni yokubuyela emntla. Nangona kunjalo, uBragg wanyanzeliswa ukuba akhiphe olu khetho njengoko umkhosi wakhe ube mfutshane kwiimbumbano kwaye wayengenayo i-pontoons eyaneleyo ukunyuka umlambo omkhulu. Ngenxa yolu bandela, kwaye ekufumaneni ukuba imikhosi kaRosecrans yayifutshane kwimilinganiselo, esikhundleni sakhe wakhetha ukuza kuhlasela umzi waza wabangela amadoda akhe ukuba abekwe kwiindawo ezilawulayo kwi-Lookout Intaba ne-Missionary Ridge.
Ukuvula "i-Cracker Line"
Kuyo yonke imigca, iiRosecrans eziphazamiseka ngokwengqondo zazixhalabisayo ngemiba yemihla ngemiyalelo yomyalelo wakhe kwaye zingabonanga ukuthabatha inxaxheba. Xa imeko ihlahloka, uMongameli uAbraham Lincoln wadala iCandelo leeMpi laseMississippi waza wabeka uMajameli Jikelele u-Ulysses S. Grant ngokulawula yonke imikhosi yoMbutho eNtshona.
Ukuhamba ngokukhawuleza, Banika iiRosecrans ezikhululekile, ngokumthabatha kunye noMongameli Jikelele uGeorge H. Thomas . Ngethuba besendleleni eya eChattanooga, iGrant yafumana ilizwi elaseRosecrans elungiselela ukushiya eso sixeko. Ukuthumela igama ngaphambili ukuba liza kubanjelwa kwiindleko zeefowuni, wathola impendulo evela kuTomas ethi, "Siza kubamba idolophu size silambile."
Ukufika, iGrant yavuma isicwangciso se-Army ye-Cumberland ingunjineli oyinhloko, uMongameli Jikelele uWilliam F. "Baldy" Smith , ukuvula umgca wokunikezela kwiChattanooga. Emva kokusungula ukuhlaliswa kweempahla ezinempumelelo kwiBrown's Landing ngo-Oktobha 27, ngasentshonalanga kweso sixeko, uSmith wakwazi ukuvula indlela yokubonelela ebizwa ngokuba yi "Cracker Line." Oku kwavela kwi-Ferry yase-Kelley ukuya kwisikhululo se-Wauhatchie, emva koko kwajika ngasentla kwintlambo ye-Lookout kwiFerry Brown. Izibonelelo zingaphinde zitshintshwe ngaphesheya kweMoccasin Point ukuya eChattanooga.
Ngobusuku ka-Oktobha 28/29, uBragg wayala uLieutenant General James Longstreet ukuba ahlukanise "I-Cracker Line." Ukuhlaselwa e-Wauhatchie , i-Confederate jikelele ibambe iqela likaBrigadier General uJohn W. Geary. Kwiminye imbalwa yeemfazwe zoMkhosi zoLuntu ezilwa nxamnye nobusuku, amadoda ka Longstreet ahlaselwa. Ngendlela eya kwiChattanooga evulekileyo, iGrant yaqalisa ukuqinisa isikhundla seManyano ngokuthumela uMongameli Jikelele uJoseph Hooker kunye ne-XI kunye ne-XII Corps kunye neenkalo ezine ezongezelelweyo phantsi koMlawuli Jikelele uWilliam T. Sherman . Ngoxa i-Union yayikhula, uBragg wanciphisa umkhosi wakhe ngokuthumela i-Longstreet body eKnoxville ukuba ihlasele ibutho leManyano phantsi kwe- Major General Ambrose Burnside .
Jikelele Jikelele Ulysses S. Grant
Jikelele uGeorge H. Thomas
Jikelele uBraxton Bragg
ULieutenant General William Hardee
Imfazwe ephezulu ngaphezulu kwamafu
Emva kokudibanisa isikhundla sakhe, iSibonelelo saqala ukusebenza kakubi ngoNovemba 23, ngokuyalela uTomas ukuba aqhubeke ukusuka kwisixeko kwaye athathe intambo yeenduli kufuphi neenyawo zeMissionary Ridge. Ngomso olandelayo, u-Hooker wayala ukuba athathe iNtaba ye-Lookout. Ukuwela uMlambo waseTennessee, amadoda kaHooker afumanisa ukuba ii-Confederates zahlulekile ukukhusela inqambi phakathi komlambo nentaba. Ukuhlaselwa ngolu hlobo, amadoda aHooker aphumelela ukuxoshela ama-Confederates entabeni. Njengoko imfazwe yaphela ngo-3: 00 ntambama, inkungu yahla entabeni, ifumana imfazwe igama elithi "Imfazwe Ephezulu Kwamafu" ( Imephu ).
Ngasenyakatho kweso sixeko, uGrant wacela uSherman ukuba ahlasele umda wasentla we-Missionary Ridge.
Ehamba ngaphesheya komlambo, uSherman wathatha into ayakholelwa ukuba ngumthamo ophezulu wasentla, kodwa empeleni wayeyiBilly Goat Hill. Ukuhamba kwakhe kwagqitywa yi-Confederates phantsi kwe- Major General Patrick Cleburne eTannel Hill. Ukukholelwa ekuhlaselweni kwangaphambili kwi-Ridge Ridge ukuba azibulale, uGrant uceba ukugubungela umgca kaBragg kunye noHooker ohlaselayo ngasemzantsi noSherman ovela ngasentla. Ukukhusela isikhundla sakhe, uBragg wayala imizila emithathu yemikhosi ebhunyulelwe ebusweni be-Missionary Ridge, kunye neengqungquthela.
Ukuphuma ngosuku olulandelayo, ukuhlaselwa kokubili kuhlangene nomsebenzi omncinci njengoko amadoda kaSherman akakwazanga ukuphula umgca weCleburne kunye neHooker yayilibazisekile ngamabhuleji atshisa phezu kweChattanooga Creek. Njengoko kwafika iingxelo zenkqubela phambili, uGrant waqala ukukholelwa ukuba uBragg wayebuthathaka kwiziko lakhe ukuze agxininise iiplanki zakhe. Ukuvavanya oku, wamyala uTomas ukuba ahambe amadoda akhe aze athathe umgca wokuqala wemigodi ye-Confederate kwi-Missionary Ridge. Ukuhlaselwa, i-Army yeCumberland, eyayihlala iiveki ekhuthazelele ukuhlaselwa e-Chickamauga, yaphumelela ekuqhubeni ii-Confederates kwindawo yazo.
Ukuqhawula njengoko kuyalwe, i-Army yaseCumberland yakukhawuleza ithatha umlilo oqaqambileyo ukusuka kwamanye amabini emigodlo engaphezulu. Ngaphandle kwemithetho, amadoda aqala ukunyuka entabeni ukuze aqhube imfazwe. Nangona ekuqaleni wayevutha ngumsindo kwizinto awayezibona ukuba wayengayithobeli imiyalelo yakhe, uGrant wenza ukuba kuhlaselwe ukuhlaselwa. Kulo mgca, amadoda kaTomas aqhubela phambili, axhaswa kukuba iinjongo zikaBragg zenze ngokugqithiseleyo izixhobo zokulwa kwiindawo ezisemgangathweni, kunokuba umkhosi wasemkhosini.
Le mpazamo yathintela izibhamu ukuba zithwalwe kubahlaseli. Kwelinye yeemeko ezigqithisileyo zeemfazwe, amajoni aseManyano aphakamisa intaba, aphule isikhungo saseBragg, wabeka i-Army yaseTennessee ukuba ihambe.
Ukunqoba kweChattanooga kubize i-Grant 753 yabulawa, i-4,722 yalimala, kwaye i-349 ilahlekile. Ukulimala kukaBragg kubhalwe njengama-361 abulawe, ama-2,160 aphukileyo, kunye nabangu-4,146 abathatyweyo kwaye balahlekile. I-Battle of Chattanooga yavula umnyango wokungena kwe-Deep South kunye nokubanjelwa kwe-Atlanta ngo-1864. Ukongezelela, imfazwe inqabile i-Army yaseTennessee kunye noMongameli we-Confederate ogxininkulu uJefferson Davis ukukhulula uBragg aze amshiye uYoseph E. E. Johnston . Ukulandela imfazwe, amadoda kaBragg abuyela ngasezantsi eDalton, GA. I-Hooker yathunyelwa ukulandela umkhosi ophukileyo, kodwa wahlulwa nguCleburne kwi-Battle of Ringgold Gap ngoNovemba 27, 1863. Imfazwe yaseChattanooga yayiyexesha lokugqibela uGrant wahlasela eWest njengoko wayefudukela eMpuma ukuze ahlangabezane ne-Confederate General Robert E ULee emva kwentwasahlobo elandelayo.
Ngexesha elithile iMfazwe yaseChattanooga ibizwa ngokuba yi-Third Battle yaseChattanooga ngokubhekisele kwiintetho ezalwa kuJuni 1862 no-Agasti 1863.
Imfazwe yaseFilipi - iMfazwe yombutho
Imfazwe YaseMerika Yomkhosi: iMfazwe yeChampion Hill
Imfazwe Yomthonyama yaseMelika: iMfazwe yasePlorieta Pass
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseMalvern Hill
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yeSikhululo seBray
Imfazwe YaseMelika: Umgadi Jikelele uJohn C. Caldwell
Imfazwe YaseMerika: I-General E. E. Lee
I-albhamu ye-10 ye-Rock Best ye-1995
Isishwankathelo kunye nohlalutyo lwe-'Meno 'yePlato
IJografi yamazwe aseAfrika
Kutheni Kuthiwa I-Ice Float?
Imfazwe yeLwandle lwasePhilippines - iMfazwe Yehlabathi II
Abalandeli abaBazi beArabic abavela ku-Omar Sharif baya eSalma Hayek
Orthodoxy ngokumelene namaOdodoxy